Wasiirka Caafimaadka oo furay dhismaha qeyb cusub oo lagu soo kordhiyay Cisbitaalka Hargeysa | Somaliland.Org
Wasiirka Caafimaadka oo furay dhismaha qeyb cusub oo lagu soo kordhiyay Cisbitaalka Hargeysa
September 30, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Wasiirka Wasaarada Caafimaadka ee Somaliland Dr Xuseen Maxamed Muxumed (Xuseen Xoog) ayaa maanta xadhiga ka jaray dhisme cusub oo lagu soo kordhiyay cisbitaalka guud ee caasimada gaar ahaan qaybaha Sawirka Lafaha ee Ex-Ray.
Wasiirka Wasaarada Caafimaadka Xuseen Muxumed Xoog oo ka hadlay munaasibadii xadhiga lagaga jarayay qaybtan lagu soo kordhiyay cisbitaalka guud ayaa waxa uu sheegay qaybtan uu furay ay u dhamaystiran yihiin qalabkii ay ku shaqayn lahayd marka laga reebo qalab dhexda ku soo jira. Waxaanu intaasi ku daray Wasiirku inay qaybtani tahay tii afraad ee lagu soo kordhiyo cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadku waxa kale oo uu sheegay inay ku talo jiraan sidii dhamaan cisbitaalka dayactir loogu samayn lahaa, isla markaasina ay ka gacan siinayso Midowga Yurub.
Dr. Xuseen Muxumed Xoog waxa uu xusay in isbadal muuqda ku talaabsaday cisbitaalka guud iyadoo ay haatan ka hawlgalaan dhakhaatiir ajanibi iyo Somaliland u dhashay, isla markaasina fuliya adeegyo badan oo caafimaad. Waxaanu tusaale u soo qaatay in markii uu horaysay cisbitaalka guud laga hirgaliyay qayb lagu daweeyo dadka ay ku dhacaan cudurada maskaxdu.
Wasiirka Caafimaadku waxa uu u mahad celiyay Madaxweynaha Somaliland ku xigeenkiisa iyo Wasaarada Maaliyada oo xil gaara iska saaray hawlaha dhinaca caafimaadka. Agaasimaha cisbitaalka guud Axmed Xaaji Cumar Askar oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in muddo lix bilood gudahood lagu soo kordhiyay dhismaha qaybtan afraad ee cisbitaalka.
Sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gudida cisbitaalka Axmed Muxumed Madar, waxaanu ka jeediyay munaasibadaasi hadal ku wajahan horumarinta caafimaadka.
Previous PostDib u qiimee tirada wasiirrada soo maray Somaliland 1991-2012?Next PostSuldaan Baaq u jeediyay Madaxweynaha Deegaanka Soomaalida Itoobiya	Blog